E-Journal: ကမ္ဘာကြီး ပူနွေးလာသတဲ့လား - မြင့်သန်း
ကမ္ဘာကြီး ပူနွေးလာသတဲ့လား - မြင့်သန်း
တုံးတယ်လိုပြောရင်လည်းခံရမှာပဲ။ ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကို(ကျွန်တော့်အမြင် သက်သက်အရ ရေးရရင်) ခေါင်းထဲထည့်စဉ်းစားသင့်တဲ့ကိစ္စလို့ မထင်ဘူး။
အနောက်တိုင်း လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာ အလုပ်မရှိကြောင်ရေချိုးဖို့ လုပ်နေတဲ့လူတွေ၊ နိုင်ငံရေးအခြေခံနဲ့ တစ်စိတ်ကို တစ်အိတ်လုပ်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေ၊ လူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကြီးကို ကယ်တင်မယ်လို့ကြေငြာပြီး သဘာဝတရားကြီးကို ထိန်းသိမ်းကြပါ။ စောက်ရှောက်ကြပါလို့ ကြွေးကြော်ရင်း မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း၊ အင်တာနက်စတာတွေ မရှိရင် မနေတတ်တဲ့ တံလျှပ်လိုပညာတတ်တွေ၊ အဲဒီလူတွေက စနစ်တကျလှုံ့ဆော်ထားတဲ့ လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုပဲလို့မြင်တယ်။ ဒီနေရာမှာ နိုင်ငံရေးအခြေခံနဲ့ မဟာဗျူဟာအဖြစ် သုံးစွဲဖွဲ့ စနစ်တကျ လုပ်ဆောင်ထားပုံမျိုးကို ပုံပေါ်အောင်ကွက်တိဖော်ပြလို့ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဒီတော့ ရေးတေးတေးမြင်အောင် Greenpeace ရဲ့ နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုသာ ပြန်ပြီးဆင်ခြင်ကြည့်ကြပါ။ ပညာရှင်တစ်ဦးပြောသလို Global warming isapolitical, rather than an scientific creation.ဆိုသလိုဖြစ်နေတယ်။
ကျွန်တော်က သိပံ္ပပညာရှင်လည်းမဟုတ်ဘူး။ ဒီတော့ သိပံ္ပဆရာများက ဆဲရင်လည်း ခံရမှာပဲ။ လမ်းပေါ်က လူတစ်ယောက်အမြင်နဲ့ ဆွေးနွေးချင်တာပါ။ အဓိကထား ဆွေးနွေးချင်တာကတော့ “ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာတယ်ဆိုတာ အကြောင်းရင်းကတော့ လူတွေ ကြောင့်ပဲ” လို့ဆိုတဲ့စကားပဲ။ ဒီစကားကို လက်မခံလိုဘူးဆိုရင် ကျွန်တော်အနေဲ့ ထောက်ခံရုံပဲ။ ပြောတဲ့လူကိုယ်တိုင်က ဗြောင်လိမ်ဗြောင်စား။ ဒီစကားကို နှစ်ပေါင်းသိပ်မကြာခင်ကလေးတင်က အိမ်ဖြူတော်မှာ ပညာရှင်တွေကို ကလင်တန်က ပြောခဲ့တာ။ ရုပ်မြင်သံကြားကင်မရာတွေ၊ သတင်းစားဆရာတွေရဲ့ မျက်နှာတွေကို တည့်တည့်ကြည့်ပြီး ဗြောင်လိမ်ခဲ့ဖူးတဲ့လူမို့ လက်သင့်ခံနေစရာမလိုဘူးလို့ မြင်တယ်။ ကလင်တန်ပြောလို့မှမဟုတ်ဘူး။ လက်ခံစရာကို မကောင်းလို့ပါ။ ဒါပေတဲ့ အဲဒီစွဲချက်တင်ထားတာကို နည်းနည်းဆွေးနွေးချင်တယ်။ သိပ္ပံအခြေကလေး နည်းနည်းလောက်ရှိရင်ပဲ ကမ္ဘာကြီးပိုပြီး ပူနွေးလာတယ်ဆိုတာဟာ ဘာကြောင့်ရယ်လို့ သိနိုင်ပါတယ်။ ရာစုနှစ်တစ်ခုမှာ ဆယ်ဒီဂရီလောက်တိုးလာတတ်တာဟာ သဘာဝပါ။ ပိုမိုနွေးတဲ့ ဆောင်းဥတုတွေ၊ ပိုမိုအေးတဲ့ နွေဥတုတွေ ရှိခဲ့တာပဲ။ သူ့အရပ်နဲ့ သူဖြစ်ခဲ့တာတွေရှိခဲ့တာပဲ။ ဒါကြောင့် ကမ္ဘာကြီးရဲ့အပူချိန် ပြောင်းသွားတယ်လို့ မဆိုနိုင်ဘူး။ တစ်ခုမေ့လျော့ထားဖို့ မသိကျိုးကျွန်ပြုထားဖို့ မသင့်တာက သဘာဝတရားရဲ့ဖြစ်ပျက်နေခြင်းအကြောင်းပဲ။ နေရဲ့စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုအတိုင်းအတာ။ ကမ္ဘာကြီးလည်ပတ်နေပုံ။ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ ရုတ်ခြင်းပြောင်းလဲတတ်တဲ့ သဘော။ အာကာသထဲမှာ ပဲ့ထွက်လာတဲ့ဂြိုလ်တွေ၊ အစိုင်အခဲတွေ … အဲဒါတွေအပြင် ငလျင်ကြောင့်၊ မီးတောင်တွေ ပေါက်ကွဲလာတာကြောင့် ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ ဖုန်မှုန့်တွေကို မေ့ထားလို့ မရပါဘူး။ မီးတောင်တစ်ခုပေါက်ကွဲရာက ပေါ်ထွက်လာတဲ့ ဖုန်မှုန့်၊ မီးခိုး စတာတွေ လေထုထဲရောက်ရှိပြီး လေထုညစ်ညမ်းတာမျိုး၊ လေထုကိုညစ်ညမ်းစေဖို့ လူသားတွေက လုပ်မယ်ဆိုရင် ဆယ်နှစ်လောက်လုပ်ရမယ်လို့ ပညာရှင်တွေက လေ့လာတင်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ မီးတောင်တွေ၊ ပင်လယ်တွေ၊ တိရစ္ဆာန်တွေကို မေ့ထားလို့ မဖြစ်ပါဘူး။
ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ဟာ ဂရင်းဟောက်(စ)လို အကျိုးတရားမျိုးပေးဖို့(ဆိုလိုတာက Greenhouse effect ဖြစ်ဖို့)အတွက် အဓိကပဲလို့ ဆိုကြပါတယ်။ ဆိုလိုတာက ကမ္ဘာကြီးပိုပြီးပူနွေးလာဖို ဆိုးကျိုးတွေပေးဖို့လို့ ဆိုကြတယ်။ ဒီတော့ သစ်ပင်တွေစိုက်ဖို့ ပြောကြပြန်တယ်။ သစ်ပင်က လေထုကို သန့်ရှင်းအောင် ကာဗွန်ဒိုင်အောင်ဆိုဒ်ကို စုပ်ယူတယ်လို့ ပြောကြတယ်။ တစ်ခုပဲ ချန်ပြီး ပြောကြတာကိုး။ သစ်ပင်ဟာ အရွယ်အရောက်ခင်(while growing ဆိုလိုတာပါ)အထိပဲ။ အရွယ်ရောက်တဲ့အခါ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ကို မစုပ်ကြတော့ပါဘူး။( Give off carbon dioxide when fully Grown)။ သစ်ကိုင်းခြောက်တွေ၊ လဲပြိုနေတဲ့သစ်ပင်ခြောက်တွေကလည်း ကာဗွန်ဒိုင်အောင်ဆိုဒ် ထုတ်ပစ်လိုက်တတ်ကြတာပဲ။ ဒါကြောင့်လည်း တောင်ရိုးတောင်ကြောတွေပေါ်မှာ တစ်ခါတရံ မြူခြေဆိုင်းသလိုမျိုး တောင်ခိုးဝေနေတာတွေ(Haze)တွေ့ရတတ်တာပဲ။ ကမ္ဘာကြီးကိုရံတားပြီး ဒုက္ခပေးတယ်ဆိုတဲ့ ဂရင်းဟောက်(စ) အကျိုးတွေဖြစ်ဖို့ ကာဗွန်ဒိုင်အောင်ဆိုဒ်တစ်ခုတည်း မျက်နှာလွဲခဲပစ်ပြောနေကြရတာက တခြားတစ်ခုကိုဘာမှမလုပ်နိုင်ကြလိုပါ။ အဲဒါက ရေမှုန်(vapour)တွေပဲ။ နာဆာသုတေသနဌာနက water vapour is the predo-minant Greenhouse gas, and playsacrucial role in the grobal climate system လို့ တင်ပြခဲ့ဖူးတာပဲ။ ရေခိုးရေငွေ့ပျံရာက(Evaporation)ဖြစ်ပေါ်လာတာတွေ။ ဘာမျှမတတ်နိုင်ဘူး။ ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး။ သဘာဝတရားရဲ့လုပ်ရပ်ပဲ။ တကယ်တော့ ဂရင်းဟောက်(စ) အကျိုးတရားဆိုတာကလည်း အထိုက်အလျောတော့ရှိရမှာပဲ။ အဲဒီလို ဂရင်းဟောက်(စ) အကျိုးတရားမရှိရင် ကမ္ဘာကြီးဟာ အင်္ဂါဂြိုလ်လို ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ ဓါတ်ငွေ့အကြောင်း ဆွေးနွေးရင်း လူလုပ်ဓါတ်ငွေ့ဖြစ်တဲ့ စီအက်(ဖ)စီ(Chlorofluro-carbon)အကြောင်း နည်းနည်းတင်ပြဖို့ လိုမယ်။ ဒီစီအက်(ဖ)စီကြောင့် အိုဇုန်းအလွှာပါးသွားတယ် Ozone depletion ဆိုတဲ့အယူအဆ၊ တင်ပြချက်တစ်ခုပေါ်ခုဖူးတာ မှတ်မိကြပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီတုန်းကလည်း သိပံပညာရှင် အတော်များများခမျာ ဘာပြောရမှန်းကို မသိဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ စီအက်(ဖ)စီ ဓါတ်ငွေ့ဟာ လေးတယ်။ အထက်က လေထုအလွှာထဲကို တိုးမဝင်နိုင်ဘူး။ ဒီပြင် စီအက်(ဖ)စီဓါတ်ငွေ့ကို ဘက်တီးရီးယားတွေက ဖြိုဖျက်ပစ်လိုက်နိုင်တယ်။(ဖျက်ထုတ်ပစ်လိုက်နိုင်တယ်)။ ဒီတော့အချက်အလက်ကို အပြည့်အစုံ မတင်ပြကြဘဲ လိုသလိုဆွဲယူပြီး(အရပ်စကားနဲ့ ဆိုရရင်တော့ “ဇာချဲ့တယ်လို့ပဲဆိုရလိမ့်မယ်) မျောက်ပြဆန်တောင်း လုပ်တာပဲ။ တစ်ခြားပြသနာတစ်ခုက အိုဇုန်းအလွှာဟာ ၁၉၂၆ ခုလောက်ကတည်းက ပါးလာတာ။ စီအက်(ဖ)စီ တစ်မျိုးလို့ခေါ်ရမည့် Freon က ၁၉၂၈ အထိ မပေါ်သေးဘူး။
အိုဇုန်းအလွှာပါးလာတယ် ဆိုတာကလေးလည်း အထိုက်အလျောက်စဉ်းစားကြည့်ဖို့လိုမယ်။ သဘာဝရဲ့ဖြစ်စဉ်ထဲက ကိစ္စတစ်ခုနဲ့လည်း ဆိုင်နေလို့ပါ။ ကမ္ဘာကြီးရဲ့တောင်ဖက်ခြမ်းနဲ့ မြောက်ဖက်ခြမ်းတောင် သိပ်မတူကြဘူး။ တောင်ဖက်ခြမ်းဆီမှာ ဝင်ရိုးစွန်းက(ရှိရင်းစွဲ)လေအေးတွေဟာ အနွေးပိုင်းကလာတဲ့ လေပူတွေကို အဲဒီဒေသဆီ တိုးဝင်မလာနိုင်အောင် တားထားကြပါတယ်။ ဒီတော့ အအေးဓာတ်ပိုကဲလာပြီး ရေခိုးရေငွေ့နဲ့ နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့တွေက တိမ်ဆိုင်တိမ်ခဲတွေဖန်တီး။ အဲဒီကနေ နှင်းကျလာတဲ့အခါ နိုက်ထရိုဂျင်ကိုသယ်လာ။ အဲဒီကနေ ကလိုရင်းဓာတ်ငွေ့ ဖွဲ့စည်းဖြစ်ပေါ်လာ။ အဲဒီရပ်ဝန်းဆီ အနွေးဓာတ်ပြန်ရောက်လာတာနဲ့ မိုးသားတိမ်ဆိုင်တွေက အခိုးပျံ။ အဲဒီတော့ ကလိုရင်းက လိုဇုန်းကို ပါးလွှာပစ်လိုက်တာပဲ။ အဲဒီလို ကမ္ဘာကြီးရဲ့တောင်ဖက်ခြမ်းမှာ ဖန်တလဲလဲဖြစ်ပျက်နေတာက ဇွန်လကနေ နိုဝင်ဘာလအထိပဲ။ နောက်ခြောက်လအတွင်းမှာတော့ အိုဇုန်းအလွှာကြီး ပြန်ပြီးပြည့်လာတတ်တယ်။ အဲဒီလို ဖြစ်တာကလည်း ကမ္ဘာကြီးရဲ့တောင်ဖက်ခြမ်းမှာ ပိုဖြစ်တယ်လို့ ဆိုကြတယ်။ မြောက်ဖက်ခြမ်းမှာ ခုလိုပုံစံမျိုးတစ်သားတည်းမဟုတ်ဘူး။ ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ သူတို့ဆီက ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းကျောင်းရေးအေဂျင်စီရဲ့ ဇာချဲ့မှုတစ်ခုလို့တောင် ပြောလို့ရနိုင်တယ်။ ဒီလိုပြသနာမျိုးတွေကို အထိန့်တလန့် အဆန်းတကြယ်ဖြစ်အောင်မလုပ်ရင် သင်းတို့မှာ လုပ်စရာမှမရှိပဲကိုး(သင်းတို့ကြောင့်ပဲ သက္ကရာဇ်၂၀၀၀ မတိုင်ခင်ကလည်း Rondon ဓါတ်ငွေ့နဲ့ပတ်သက်လို့ တောပြိုသလို သံစုံထွက်ပြီး ထိတ်လန့်ခဲ့ကြရသေးတယ်။) NCDC (National Climatic Data Center) က သိပံ္ပပညာရှင်တွေရဲ့ အလိုအရတော့ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တစ်ရာလောက်အတွင်းမှာ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ ဥတုရာသီပြောင်းလဲမှုဆိုတာ ပြောပလောက်အောင် ပြောင်းလဲသွားတယ်လို့ မဆိုနိုင်ဘူးတဲ့။ အဲဒီလိုပဲ MITက ပညာရှင်လင်(ဒ)ဇင် Richard S Lindzen ကလည်း(သူပြောတဲ့စကားလုံးအတိုင်းရေးပြပါရစေ) We don’t have any evidence that global warming is aserious problem တဲ့။ ဒီတော့ သိပံပညာရှင်တွေနဲ့ ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာတယ်ဆိုသူတွေအကြားမှာ တစ်သားတည်းကျတဲ့ သဘောတူညီမှုမရှိသေးဘူးလို့ ဆိုရမယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ ရီပတ်ဗလစ်ကင်ပါတီ Republican party ကို အကြံပေး နေရတဲ့ လာန့်(C) Frank Luntz ကလေ့လာပြီး တင်သွင်းတဲ့ အစီရင်ခံစာထဲမှာတော့ သူတို့နိုင်ငံရေးသမားတွေပြောတာကို လူတွေကျလာအောင် ဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတာ တင်ပြထားဖူးတယ်။ ဆိုလိုတာက သူတို့ အကျိုးစီးပွားအတွက် ပြောနေတာတွေကို လူတွေနားယုံလာအောင် ဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတဲ့ လမ်းညွှန်မှုတောင်ရှိတယ်။ ဒီတော့ ကမ္ဘာကြီး ပူနွေးလာတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ သံယောင်မလိုက်မိကြဖို့တော့ လိုလိမ့်မယ်။
ဒီမှာ ကျွန်တော်တင်ပြချင်တဲ့ အဓိကအချက်ဟာဒါပဲ။
ကျွန်တော်တို့ဆီက ပညာရှင်၊ ပညာရှိ၊(ထည့်ချင်ရင်ကဗျာဆရာတွေတောင် ထည့်လို့ရမယ်။ မဆီမဆိုင် ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းနဲ့ မြန်မာကဗျာကို ရှာကြံဆက်တတ်ကြတာကိုး။) တွေနဲ့ တစ်ပတ်ရစ် ဂျာနယ်လစ်တွေက ထစ်ကနဲဆို အနောက်က တစ်ခုခု အသံထွက်လာရင် အတင်းအဓမ္မ ဦးအောင်ဘာသာပြန် အပင်းသွင်းနေကြတာကို အကြိမ်ကြိမ်ဖတ်ခဲ့ရဖူးပါတယ်။ ဒီကိစ္စမှာလည်း ဘယ်ရွေ့ဘယ်မျှ ဆီပုလင်းခါးချိတ်ပြီး ရှေ့ နေလိုက်ခဲ့ကြပြီလဲဆိုတာတော့ ကျွန်တော်မသိဘူး။ ရန်ကုန်မှာ အမှတ်မထင် လမ်းကြုံတာနဲ့ ကျောင်းနေဖက်တစ်ယောက် အိမ်ဝင်တွေ့တော့ သူ့သားဘွဲ့လွန်ကျောင်းသားနဲ့လည်းတွေ့ရတယ်။ သူ့အဖေနဲ့က ဒီလောက် စကားမပြောရဘူး။ သူနဲ့ပိုပြောရတယ်။ သူ့စကားထဲမှာတော့ ကမ္ဘာကြီးပိုပူနွေးလာတယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စက အများကြီးပဲ။ သူ့ကြည့်ရတာလည်း အတော့်ကို စိတ်မချမ်းသာပုံရတယ်။ “နည်းနည်းသိတာဟာ အန္တာရာယ်များတယ်” ဆိုတာမျိုးပဲ။ ဒီတော့ ကျွန်တော်လည်း လက်လှမ်းမီလို့ သိရတာလေးတွေ ပြောပြရတယ်။ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံရေးအရ တင်ကူးလုပ်ဆောင်ရမယ့် ဗျူဟာ အကြောင်းလည်းတိုးတိုး ပြောပြရတယ်။ ကုလသမဂ္ဂရဲ့အစီရင်ခံစာတစ်ခုက နွားတွေအီးအီးပေါက်တာကထွက်တဲ့ ဓါတ်ငွေ့ Cattle emissions ဟာလူသုံး ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာတွေက ထွက်တဲ့ဓါတ်ငွေ့ထက် များတယ်ဆိုတာလည်း အသိပေးလိုက်ရသေးတယ်။ “ကမ္ဘာကြီးဟာ ပိုပြီးအေးလာလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ လှန့်လုံးရောမင်းကြားဖူးသလား”လို့ မေးကြည့်မိတယ်။ သူမကြားဖူးလောက်ဘူးဆိုတာ ကျွန်တော်ရိပ်မိတယ်။ သူက အသက်သုံးဆယ်မှ မပြည့်တတ်သေးဘဲကိုး။ ကမ္ဘာကြီးဟာ ပိုပြီးအေးလာမယ်ဆိုတဲ့ လှန့်လုံးဟာ ၁၉၇၀ ခုနှစ်ကာလတွေ အတွင်းက ပေါ်ခဲ့ဖူးတယ်။ ခုလိုပဲ လန့်တဲ့သူတွေက အတော်လန့်ခဲ့ကြတာ။ အဲဒီတုန်းကတော့ ရှနိုက်ဒါ Stephen Schneider ဆိုတဲ့ ငနဲက ကမ္ဘာကြီးဟာ လေထုမသန့်ရှင်းမှုတွေမှာ အခြေခံပြီးရေခဲခေတ်လို ပြန်ဖြစ်သွားမယ်လို့ ဆိုဖူးတယ်။ ဟော အခုတော့ အဲဒီရှနိုက်ဒါပဲ ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမယ်လို့ ကြွေးကြော်တဲ့ ကျွမ်းကျင်သူပညာရှိ(အပ်စပတ်ကြီး)ဖြစ်လာတော့တယ်။ ဟိုစဉ်ကတည်းက ရှနိုက်ဒါက လှန့်ပေးဖို့လိုတယ်ဆိုတာပြောဖူးတယ်။(မူရင်းအတိုင်းရေးပြပါရစေ).....
To capture public imagination, we have to offer up scary scenarios, make simplified dramatic statements and little mention of any doubts one might have. Each of us has to decide the right balance betewwn being effective and being honest.
ရှနိုက်ဒါအနေနဲ့ ဟိုစဉ်က ကမ္ဘာကြီးဟာ ရေခဲခေတ်ပြန်ဖြစ်သွားမယ်လို့ ပြောရတာက ၁၉၄၀ ခုနှစ်နဲ့ ၁၉၇၀ ခုနှစ်အကြားမှာ ကမ္ဘာကြီးက အတော်ကလေးအေးတယ်။ ကမ္ဘာကြီးဟာ ပူလိုက်၊အေးလိုက်ဖြစ်တတ်တာ၊ သူ့သဘာဝပါ။ ကမ္ဘာ့သမိုင်းမှာ အလယ်ခေတ်ကာလအတွင်း ပူနွေးချိန်ရယ်ဆိုပြီး ခေါ်ခဲ့ကြတာ(so-called Medieval Warm period) တောင်ရှိခဲ့သေးတာပဲ။ သက္ကရာဇ် ၁၁၀၀ နဲ့ ၁၄၀၀ အကြားကာလပါ။ သိပံ္ပပညာရှင်တွေအနေနဲ့ ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာရတာနဲ့ ပက်သက်လို့ ယတိပြတ်အကြောင်းမပြနိုင်သေးပေတဲ့၊ သဘာဝတရားအခြေခံနဲ့ ကမ္ဘာကြီးဟာ ပူနွေးခဲ့ဖူးတယ်ဆိုတာကတော့ သမိုင်းမှာရှိခဲ့တာပဲ။ တကယ်လို့သာ ဒီနေ့ကာလမှာ အလှန့်ခံထားရတဲ့အတိုင်း ကမ္ဘာကြီးပိုမိုပူနွေးလာတာဟာ ကမ္ဘာကြီး ပျက်သုန်းသွားလောက်အောင် ဆိုးရွားသွားမယ်ဆိုလို့ကတော့သိပ်မပူပါနဲ့ ၊ ဘယ်သူမှ မတားနိုင်ပါဘူး။ ပူနေလို့ အပိုပဲ။ ဖတ်ချင်ကြရင်ဖြင့် ရှာကြံဖတ်ကြည့်ဖို့ စာအုပ်တစ်အုပ်နာမည် ပေးပါရစေ။ စာအုပ်နာမည်က The Politically Incorrect Guide to Global Warming and Environmentalism ပဲ။ ရေးတာက Christopher C . Horner ဆိုသူပဲ။(Horner ဟာလူသူလေးပါး အလေးထားရတဲ့ ပညာရှင်တစ်ဦးပါ။)
အခုတော့ ကလင်တန်တင် မဟုတ်တော့ဘူး။ သူ့လက်အောက်မှာ လုပ်လာတဲ့ အဲလ်ဂေါ Albert Amold Gore ကပါ ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကို အခြေခံပြီး ကမ္ဘာကြီးကိုခါးပိုက်ထောင်ထဲထည့်ဖို့ လုပ်လာပြန်တယ်။ ကမ္ဘာအနှံ့ လျှောက်သွား။ တရားဟော၊ အင်တာဗျူးလုပ်(ဒီနေရာမှာ သူ့ ထမင်းသူစားပြီး စေတနာဝန်ထမ်း လုပ်နေတာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာလေးတော့ သတိရကြပါ။) မှတ်တမ်းတင်ရုပ်ရှင်ကားမျိူးတောင် ရိုက်လိုက်သေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲလ်ဂေါက သူထင်ရာသူပြောပြီး သူ့အကျိုးစီးပွားလုပ်နေတာပဲ(သူထင်ရာသူပြောနေတဲ့နောက်မှာ ရည်ရွယ်ရင်းတွေ အကျိုးဆက်တွက်ဆထားမှုတွေ စတာတွေအများကြီးပါ)။ ကံအကြောင်းသင့်ရင် ဒီလုပ်ရပ်ကြောင့် သမ္မတောင်တက်ဖြစ်နိုင်သေးတာကိုး။ သူထင်ရာ သူပြောတယ်ဆိုတာကလည်း ဒီလိုပါ။ ဥပမာ အဲလ်ဂေါက လေမုန်တိုင်းတွေ၊ လေနီးကြမ်းတွေ တိုက်တာဟာ ကမ္ဘာကြီးပိုပြီးပူနွေးလာလို့ရယ်လို့ ဇွတ်ပြောတယ်။ ကမ္ဘာကျော်မိုးလေဝသာပညာရှင် ဒေါက်တာ ဝေလျာမ်ဂရေး William Gray ကတော့( သူ့စကားအတိုင်း ဖော်ပြပါရစေ) The degree to which you believe global warming is causing major hurricanes is inversely proportional to your knowledge about these storms လို့ပြောပါတယ်။ ဒီပြင် Discover အမည်ရှိတဲ့မဂ္ဂဇင်းထဲမှာ “ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာတာဟာ လူတွေကြောင့်ပဲ ဆိုတာကတော့ မတော်မတရားချဲ့ထွင်ပြောတာပဲ။ ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာတယ်ဆိုတာကို ကျုပ်မငြင်းပါဘူး။ ၁၉၃၀ နဲ့ ၁၉၄၀အကြားမှာ အတော်ပူနွေးခဲ့တာပဲ။ ၁၉၄၀ ခုနှစ် အလယ်ပိုင်းလောက်ကျတော့ ဖြည်းဖြည်းပြန်အေးလာတာ ၁၉၇၀ ခုနှစ်တွေ အထိပဲ။ ကျုပ်နဲ့ အပေါင်းအသင်းလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကတော့ ဒီကိစ္စကို သံသယ ဖြစ်မိတယ်။ ကျုပ်တို့ကိုတော့ ဘယ်သူကမှ လာမမေးဘူး”လို့ရေးထားတယ်။ နာဆာက သိပ္ပံပညာရှင် စပင်စာ Roy Spencer ကတော့ အဲလ်ဂေါ ဖြီးလုံးတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ “Questions for All Gore” လို့တောင်ရေးခဲ့ဖူးတယ်။(ဖတ်ချင်ကြရင် အင်တာနက်မှာ ကြည့်ပါ။ http://www.tcsdaily.com/article.aspx?id=052506C)။ လင်(ဒ)ဇင်ကလည်း ခုလို ပြောပြန်တယ်။(သူပြောခဲ့တဲ့စကားတွေအတိုင်းတင်ပြပါရစေ)……
A general characteristic of Mr. Gore’s approach is to assiduously ignore the fact that the earth and its climate are dynamic; they are always changing even without any external forcing. To treat all change as something to fear is bad enough; to do so in order to exploit that fear is much worse.
ဒီတော့ အဲလ်ဂေါဟာ သူ့အထင်နဲ့ လိုရာဆွဲပြောနေတယ်။ လူနာမျက်ဖြူဆိုက်လေ ဆရာကြိုက်လေ ဆိုတာမျိုးဖြစ်အောင် လုပ်နေတယ်ဆိုတာ ပေါ်လွင်လာတယ်။
တကယ်တော့ သူလုပ်နေတာက သူ့အကျိုးစီးပွားကိုး။ သာမန်လူတွေ(သာမန်လူဆိုတာထဲမှာ ရုပ်ရှင်မင်းသား မင်းသမီးတွေလည်းပါတယ်) ဆီကိုသာ လှည့်ပြီးတောပြောတောင်ပြောပြောနေတာ။ တကယ့်ပညာရှင်တွေနဲ့ ထိပ်တိုက်တွေတော့ ရှောင်တယ်။ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံရောက်တော့ အမျိုးသားသတင်းစာ Iylland-Posten နဲ့ အင်တာဗျူးလုပ်ဖို့ သဘောတူတယ်။ အင်တာဗျူးလုပ်မယ့်လူစာရင်းထဲမှာ လော(မ)ဘု Bjorn Lomborg ကိုလည်းတွေ့ရော ချက်ချင်းငြင်းတော့တာပဲ။ လော(မ)ဘုက ကမ္ဘာကျော်ဝေဖန်ရေးပညာရှင်။ တရားသေကြတဲ့ အယူအဆတွေကို ဝေဖန်နေတဲ့ပါမောက္ခတစ်ဦး။ အဲလ်ဂေါက မရင်ဆိုင်ရဲဘူး။ မရင်ဆိုင်ရဲဆို အဲလ်ဂေါက အချက်အလက်အနေနဲ့ ထောက်ပြနေတာတွေက တစ်လွဲချည်းပဲ။ ဥပမာ ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာလို့ ငှက်ဖျားရောဂါတွေ ပိုဖြစ်လာကြမယ်လို့ပြောပြီး နိုင်ယာရိုဘီ Nairobi မှာ ဖြစ်နေတာမျိုးရယ်လို့ ထောက်ပြတယ်။ ဒါက ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးရဲ့ လေ့လာတင်ပြချက်နဲ့ လုံးလုံးမတူဘူး။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးက ဒီနေ့ကာလ နိုင်ယာရိုဘီမှာ ငှက်ဖျားမရှိတော့ဘူး လို့ဆိုတယ်။ ၁၉၂၀ ခုနှစ်ကာလ၊ ၁၉၃၀ ခုနှစ်ကာလတွေက ရှိခဲ့တာ။ အဲဒီတုန်းက ခုထက် အများကြီးအေးတယ်တဲ့။ ဒီတော့ တကယ့်အချက်အလက်နဲ့ အဲလ်ဂေါပြောနေတာတွေနဲ့ တလွဲစီပဲ။ နောက်ဥပမာ တစ်ခုပြရလျှင် အဲလ်ဂေါရဲ့ ရုပ်ရှင်ကားမှာ တောင်ဝင်ရိုးစွန်းက အင်တာတိတ်ကား Antarctica ကိုပြတယ်။ တစ်ခုလုံးမဟုတ်ဘူး။ ၂ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတဲ့ ပူနွေးတဲ့အပိုင်းကိုပြတာ။ ကျန်တဲ့ ၉၈ ရာခိုင်နှုန်းရှိတဲ့ အပိုင်းကို မပြဘူး။ အဲဒီအပိုင်းက လွန်ခဲ့တဲ့ ၃၅ နှစ်တာ ကာလအတွင်းမှာပိုအေးလာတဲ့အပိုင်း။ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ လေ့လာသူပညာရှင်များကတော့ အင်တာတိတ်ကာဟာ ဒီရာစုနှစ်ကာလအတွင်းမှာ နှင်းတွေတောင် ပိုလာဦးမယ်လို့ ဆိုကြတယ်။ အဲလ်ဂေါက မြောက်ဖက်ခြမ်းက ပင်လယ်တွေ ဆီမှာရေခဲတွေ လျှော့ပါးသွားတယ်လို့ဆိုပေတဲ့၊ တောင်ဖက်ခြမ်းမှာ ရေခဲတွေ တိုးလာတာကိုဘာမှမပြောဘူး။ သူသာ စိတ်ရင်းကောင်းနဲ့ အမှန်ကိုပြောမယ်ဆိုရင် ဘာကြောင့်အခုလို ချန်လှပ်ထားစရာလိုမှာလဲ။ တတိယ ဥပမာတစ်ခုပေးပါရစေဦး။ အဲလ်ဂေါက ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာလို့ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ဟာ ပေ၂၀ အထိမြင့်တက်လာလိမ့်မယ်လို့ ခန့်မှန်းသတဲ့။ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း IPCCက နောက်နှစ်တစ်ရာအတွင်းမှာ ၁၇(တစ်ဆယ့်ခုနှစ်)လက်မ တက်မယ်လို့ဆိုတယ်။ IPCC ဆိုတာက ကုလသမဂ္ဂရဲ့ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ UNEP အောက်ကပါ။ ပညာရှင်တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတာ။
ကောင်းပြီး။ ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ရင်ပိုမိုပူနွေးလာတယ်။ ကြိုက်သလိုပြောနိုင်ပါတယ်။ လက်ခံချင်ရင် လက်ခံနိုင်ပါတယ်။ လက်မခံလည်း အရေးမကြီးဘူး။ ကလင်တန်တို့၊ အဲလ်ဂေါတို့ အလုပ်မရှိ ကြောင်ရေချိုးပေးချင်သူတွေကတော့ စားလို့သောက်လို့ကောင်းနေမှာပဲ။ ကျွန်တော်တို့မှာ ဘာအကျိုးထူးလာသလဲ။ တစ်ပတ်ရစ်ဂျာနယ်လစ်တွေ ကောင်းမှုကြောင့် သူများက “သမိုင်းကြီးပြီးဆုံးသွားပြီ” ဆိုတာနဲ့ ကိုယ်ကလည်း ဘုမသိဘမသိ အူကြောင်ကြောင်နဲ့ “ပြီးဆုံးဖူးပြီ” ပဲ။ ဂေဟယ်ပြောတာ တကယ်မသိဘဲ ဖူကူးယာမရဲ့ ဆိုလိုရင်းမသိဘဲ “ပြီး” ထည့်လိုက်ဖူးတယ်။ သောကတွေ ပွားဖူးတယ်။ ခြေခြေမြစ်မြစ်မရှိဘဲ ငြင်းခုန်ခဲ့ကြတယ်။ ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း ဆိုပြန်တော့လည်းမဆီမဆိုင် အညာက ကဗျာဆရာကတောင် မြန်မာကဗျာကို ကလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းနဲ့ ပေးစားဖူးတယ်။ ဒေါ်လာစားရတဲ့သူတွေက မစားရဝခမန်းနဲ့ လက်ဆပ်(စ) သံလွင်ပင်ကို မျှော်မှန်းကြည့်ခိုင်းကြတယ်။ “ ကမ္ဘာအပြားကြီး”ဆိုတော့လည်း လိုက်ပြီး ယောင်တောင်တောင်နဲ့ ပြားကြည့်ခဲ့ကြတယ်။ တကယ်တော့ ဖွံ့ဖြိုးစနိုင်ငံတွေ တတိယကမ္ဘာက နိုင်ငံတွေကလူတွေ အဲဒီလိုဖြစ်လာလေလေ သူတို့အတွက် ကောင်းလာလေလေပဲ။ တည့်တည့်ပြောရရင် ဒီလိုမရေရာနဲ့ နားယောင်မှုတွေဟာ ပဋိပက္ခတိုးပွားစရာ လမ်းစတွေချည်းပဲကိုး။ တကယ်တမ်းမှာတော့ ကျွန်တော်တို့တွေက ဒုံရင်းပဲ။ ခြေအေး ဝမ်းရောင်၊လသာ တုတ်ခြစ် ….ထက်မပိုဘူး။ ကျွန်တော်အမြင်(သက်သက်)ဆိုရရင် ကျွန်တော်တို့တတွေဟာ သံယောင်လိုက်ရင်း သူများအကျိုးစီးပွားအတွက် ဝိုင်းပြီး ညာသံပေးနေမယ့်အစား၊ ကိုယ်လုပ်သင့်တာ၊ ကိုယ်လုပ်နိုင်တာ လုပ်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ ထင်မိ မြင်မိတယ်။ အိုဇုန်းအလွှာပါးသွားတာကိုထိုင်ပြီး ပူနေမယ့်အစား၊ ကိုယ်နေတဲ့ လမ်းထဲကလမ်းမှာ ချိုင့်ဖြစ်သွားတာကလေးကို ထပြီးဖို့။ ပညာတွေ သိပ်တတ်နေကြရင် ကလေးတွေ ကိုပညာလက်ဆင့်ကမ်း။ ပိုက်ဆံတွေပိုနေရင် မိဘမဲ့ကလေးတွေ၊ကျောင်းမနေနိုင်တဲ့ ကလေးတွေကို ကျောင်းထားပေး။ အလကား ပညာသင်ပေး။ အရိပ်ရချင်လို့ သစ်ပင်စိုက်ချင်ရင်စိုက်။ ကမ္ဘာကြီးကယ်တင်ဖို့ရယ်၊ ဘာရယ်၊ ညာရယ် ပြောမနေနဲ့။ ဝင်ရိုးစွန်းက ရေခဲတွေ အရည်ပျော်လာလို့ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် တက်လာမှာတွေးကြည့်နေမယ့်အစား တာလမ်းပေါ်က သစ်ပင်အောက်မှာ သောက်ရေအိုးထဲရေနည်းနေရင်ရေသွားဖြည့်။ ဘာမှမလုပ်ချင်ရင်တောင် ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာတယ်ဆိုတာကို ထိုင်ပြီးပူနေမယ့်အစား သတ္တဝါအများ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့သာ မေတ္တာပို့နေ။ ပို့တဲ့ဆီ မေတ္တာရောက်မယ်၊ မရောက်ဖူးတော့ အာမ မခံနိုင်ဘူး။ အကုသိုလ်စိတ်တော့ နည်းမယ် ထင်တယ်။
ဆွေးနွေးခြင်း၊ ချင်းတွင်းမဂ္ဂဇင်း၊ အမှတ် (၁၆)၊ မေလ၊ ၂၀၀၇
so upset to read his view point.
နှစ်ဆယ့်ခြောက်နှစ်အရွယ် သူမ …..
တရား ကျ ခြင်း